Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguSudeep
Sinamagumbi amabini anjalo anegumbi lokulala elincanyathiselweyo kunye nekhitshi. Amagumbi amabini anesuite abelana ngeterrase encinci eqhelekileyo. Amagumbi ane-suite abekwe kumgangatho wesithathu wehotele ukuze umntu akhululeke kulo naluphi na uhlobo loluntu okanye iziphazamiso. Eyona ndawo intle yendawo yethu kukuba ibekwe kwindawo yokuhlala kule ndawo. Ke inoxolo njengoko injalo ayifumani sihlwele sikhulu kunye neemoto ezinkulu.